Artifisialy Bamboo Poloney
Address: Room 402, No. 2242, Group 2, Zhaishang Village, Xiamen, Sina
Palm artifisialy Leaf Roofing for Tourism TRANO, FANORENANA
Palm artifisialy Leaf Roofing
8 sekely ho 1 metatra toradroa tafo
10-15 taona mahatratra
Loading Port: Xiamen, Sina
Fandoavam-bola Terms: T / T, Western Union
Raha mila vokatra, afaka mitsidika eto:
Ny sasany ny entana sy feno entana:
1. Product Description ho an'ny voajanahary Palm Leaf Roofing:
Beautiful, takatry sy marina.
Voajanahary thatch dia iray amin'ireo tena vokatra.
Milalao thatch voajanahary izay tena mitovy.
Tohero hamandoana sy ny simba.
Tsy misy poizina (Eco-namana fa tsy manimba ny fahasalamana)
ny vorona, biby mpikiky sy ny kankana tsy afaka mihinana azy (tsy misy maharikoriko infestations!)
Tsy misy fanampiny fikojakojana ny vola lany!
2. masontsivana ny Palm artifisialy Leaf Roofing:
Ara-nofo: High hakitroky PE
8 Pieces manarona 1 metatra tora-droa ny tafo
tapaka karbaona Size: 40x50x60cm
Carbon dia be: 50 farantsa
3. Accessories ny Palm artifisialy Leaf Roofing:
Ridge Tile azo atao amin'ny mpanjifa.
4. Fampiharana ny Palm artifisialy Leaf Roofing:
Landscape, Toerana mahafinaritra toerana, zaridainam-panjakana, toy ireny, voly zaridainam-panjakana, Resorts, vacational tanàna, kolontsaina Folk tanàna, trano fandraisam-bahiny, raitra, amoron-dranomasina, dobo filomanosana, fialam-boly fivarotana lehibe, mitono hena fisotroana, toeram-pambolena, zaridaina sy ny toeran-kafa.
5. Fametrahana ana- Palm artifisialy Leaf Roofing:
Solon thatchs azo nofantsihina teo, nanambatra ny pejin'ireo na screwed mivantana battens hazo, vy tariby harato, gitara, na ho anisan'ny tafo tanteraka rafitra miankina amin'ny tsy tantera-drano sy ny hatsarana tiany.
6. Installation fitaovana Palm artifisialy Leaf Roofing:
1) Nail na Sokiro;
7. Delivery, Fandefasana Entana, Incoterms, Payment teny sy Sample politikan'ny Palm artifisialy Leaf Roofing:
1) Delivery: 10-30 andro aorian'ny nahazo fandoavam-bola. Miankina amin'ny famarana.
2) amin'ny alalan'ny fandefasana iraka na dranomasina entana
3) Incoterms: FOB, CIF, DDU na DDP. Firenena sasany tsy afaka mampihatra DDU sy DDP.
4) Payment teny: T / T, Western Union na Paypal (6% fanampiny fiampangana ho naloan'i mpividy)
5) Sample politika: levitra, iraka anjara-raharaha tokony aloa ny mpividy.
8. Company ny fampidirana ny Palm artifisialy Leaf Roofing:
Xiamen Beatles Building Material Co., Ltd, isika dia iray amin'ireo mpitarika orinasa ho an'ny synthetic thatch, synthetic bararata, fefy voajanahary, voajanahary hodi-kazo, sns ao Shina. Izy ireo 100% simulation. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ho fireproof sy tantera-drano. Foana isika hanana modely vaovao araka ny mpanjifa 'fepetra. Ny tsena lehibe indrindra ao Shina, saingy isika dia handeha hanokatra ny tsena ivelany tao anatin'ny taona vitsivitsy. Koa izahay varotra eto rindrina ivelan'ny trano WPC tontonana sy Flooring, polyester ny volon'ondry fotsy, vy tariby harato, sns Tonga soa ny nanontany ho anay.
Previous: Grass artifisialy Thatch ny Synthetic Resin for Landscape Roofing
Next: Palm artifisialy Thatch Roof taila for Tropical House Decoration
Synthetic PE Palm Grass Thatch for Palapa Struc ...
Manufacturers for voajanahary Palm Thatch Roof Tile
Artifisialy hosoka fencing volotara ho an'ny zaridaina projection
Composite fefy mpamatsy ho an'ny isan-karazany ny fomba ...
Resin Bamboo artifisialy Panels for Exterior Com ...